XOG : Xildhibaano badan oo Olole ugu Jira in ay Noqdaan Gudoomiyaha Golaha Shacabka | Nabadqaad Online & VOA SOMALI
XOG : Xildhibaano badan oo Olole ugu Jira in ay Noqdaan Gudoomiyaha Golaha Shacabka
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa la filayaa in dhawaan doortaan Gudoomiye bedela Gudoomiyihii hore ee is casilay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari , waxaana xilkan damac badan uu uga jiraa Xildhibaano badan.
Qaar kamid ah Xildhibaanada kasoo jeeda Beesha Digil iyo Mirifle ayaa si aan toos aheyn u shaaciyay in ay u sharaxan yihiin Xilka Gudoomiyaha golaha Shacabka halka Xildhibaano kalana la filayo in dhawaan is sharaxaan.
Doorashada Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaan wali la shaacin xiliga ay dhaceyso, waxaana dhawaan la filayaa in Gudoonka Golaha Shacabka ay magacaabaan Guddi qaban qaabiya doorashada Gudoomiyaha.
Waxaa jira shaki laga qabo in doorashada Gudoomiyaha golaha shacabka ay noqoto mid furan, waxaana jira shaqsiyaad si gaar ah u wadato Madaxtooyada Soomaaliya oo xilka Gudoomiyaha golaha shacabka lala rabo.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay ka fekereyso shakhsiga u qalma lana rabaan in uu noqdo Gudoomiyaha golaha shacabka, waxaana la saadaalinayaa in xilka Gudoomiyaha golaha shacaka loo dooran doono musharaxa ay wadatao Madaxtooyada.